China Isivikelo Suit ifektri kanye nabaphakeli | Ukuqamba kabusha
Izembatho zokuvikela ezilahlwayo zisho izindatshana zokuvikela ezilahlwayo ezigqokwa abasebenzi basemtholampilo lapho behlangana nekilasi A noma iziguli zezifo ezithathelwanayo ezingaphansi kokuphathwa kwezifo ezithathelwanayo zeClass A.
1. Izembatho zokuzivikela kufanele zingangeni manzi, zisebenze kahle, zihlanzeke kahle, kungabi khona ukucasuka kwesikhumba, okulula ukugqokwa nokukhumula, ukuhlangana okuqinile, ukuvalwa nokunwebeka kwamakhokho namaqakala.
Izingubo zokuzivikela kufanele zigqokwe ngaphansi kwalezi zimo ezilandelayo: Abasebenzi basemtholampilo kufanele bagqoke izingubo zokuzivikela lapho behlangana neziguli zezifo ezithathelwanayo zeKlasi A noma ngaphansi kokuphathwa kwesifo esithathelwanayo sesigaba A.
2. Ukuthintana nokudluliselwa emoyeni noma ngamaconsi kweziguli ezithathelwanayo zezifo, kungaba igazi lesiguli, uketshezi lomzimba, uketshezi, ukuphuma kwendle.
3. Igremu elilodwa likala amagremu ayi-100
Indwangu 43 g / m2
Ubude bomkhono obungu-117cm ubude obungu-65cm besifuba esifubeni esingu-65cm ubude besandla esingu-180cm
Isikhwama sezingcezu eziyishumi
Usayizi wesikhwama 43cmx28cm
Izikhwama eziyi-10 ngakunye
Usayizi we-Carton 55cmx35cmx28cm
Isisindo esikhulu singamakhilogremu ayi-11
Isisindo se-Net: 10 kg
4. (1) Izembatho ezijwayelekile zokuzivikela zibhekisa ezingutsheni zokusebenza ezisetshenziselwa ukuvikela ekulimaleni okujwayelekile kanye nodoti kuzo zonke izimboni.
Ingahlukaniswa ngezitayela ezilandelayo: A. Umzimba ohlukaniswe ngaphezulu nangaphezulu;
B. Ingubo nebhulukwe (noma isigqoko);
G. Gqoka izingubo emuva, njll.
(2) Izimiso zokwakheka Izingubo zokuzivikela kufanele ziphephe, zisebenze, zihle futhi ziphane.
Kufanele ihambisane nale migomo elandelayo: a. Ilungiselela izidingo ezijwayelekile zomzimba kanye nempilo yomzimba womuntu.
B. Isitayela kufanele senzelwe izidingo zokuvikela.
C. Kulula ukugqoka nokusuka lapho uhamba nokunyakaza komzimba ngesikhathi sokuhlinzwa.
D. Akulula ukudala i-hook, i-hang, i-wring nokugaya isebenza.
E. Isiza ukuvikela uthuli nokungcola ekungcoliseni umzimba.
F. Izindwangu ezifanele kufanele zikhethelwe umsebenzi wezingubo zokuvikela.
G. Kulula ukuwasha nokulungisa.
H. Umbala wezingubo zokuvikela uyohluka kumbala ongemuva wendawo yokusebenza, ongeke uthinte ukwahlulela okulungile kwesiginali yokukhanya yombala ngamunye.
Lapho kunesidingo sezimpawu zokuphepha, umbala wezimpawu kufanele uhehe iso, uqine.
1. Ingabe uyimboni noma inkampani yokuhweba?
Singabantu ifektri, futhi sineminyaka engaphezu kwengu-10 kule nsimu, ukwamukela uvakashela ifektri yethu.
2. Ngingathola amasampula amahhala?
Amasampula ethu amahhala, ikhasimende lizokhokha imali ebonakalayo
3. Zingaki izinsuku zokulungiselela amasampula?
4. Ngingakwazi ukuphrinta uphawu lwami emabhokisini?
yebo, singakunikeza insizakalo ye-OEM.
5. Yini inzuzo yakho?
(1) Umbala ohlukile ongakhetha kuwo
(2) Isisindo esingafani nokukhetha
(3) Izinto ezahlukahlukene ongakhetha kuzo.
(4) Inkampani yethu ine-CE, FDA, ISO-13485, TUV, SGS izitifiketi
(5) Insizakalo yobungcweti futhi esheshayo
Langaphambilini Uketshezi Lokugeza Izandla
Olandelayo: Isikhwama semaskhi sokuvikela imaskhi se-KN95
Alahlwayo Non-oyinyumba Powder-free Gloves
China OEM China China Factory Supply Bfe99 Meltblown ...
Uketshezi Lokugeza Izandla